Sonko oo xabsiga ku jiraya ilaa Talaadada | Star FM
Home Wararka Kenya Sonko oo xabsiga ku jiraya ilaa Talaadada
Sonko oo xabsiga ku jiraya ilaa Talaadada
Barasaabkii hore ee ismaamulka Nairobi Mike Sonko ayaa xabsiga ku sii jiri doono ilaa iyo maalinka Talaadada ee Toddobaadka dambe.
Xilligaas ayay maxkamadda go’aan ka soo saari doontaa codsi uu gudbiyay oo uu ku doonayo inuu racfaan ka qaato dacwad ku saabsan inuu fal argagax abuuraya ku kacay oo uu sameysay jabhad u gaar ah.
Waaxda ciidamada la dagaalanka argagixisada ee (ATPU) ayaa doonaya in ay Sonko xabsiga ku sii hayso 30 cisho.
Waxay waaxdu sheegtay in mudadan ay ku soo dhameystiri doono baaritaan ku aaddan eedeyn loo jeediyay Mike Sonko oo ah inuu dhaqaale ugu deeqay howlaha argagixisada sidoo kalena uu hubeeyay koox maleeshiyo ah.
Talaadada ayuu barasaabkii hore ee Nairobi ka soo hormuuqan doonaa maxkamadda Kahawa West.
Qareenadiisa John Khaminwa, Assa Nyakundi, Evans Ondieki iyo Alfred Nyamu ayaa eedeymaha loo jeediyay gaashaanka u darruuray iyagoo ku tilmaamay kuwo siyaasadeysan.
Waxay su’aal geliyeen sababta ay hadda arrimahan u soo baxeen oo aan Sonko loo tuhmin tan iyo xilligii uu xildhibaan ahaa.
Previous articleRaila oo socdaal saddex cisho ah ku tagi doona ismaamulka Turkana
Next articleHorjoogihii Al-shaabaab u qaabilsanaa Galgaduud oo la soo bandhigay